World AIDS ụbọchị na-eme ememe ọ bụla afọ n'ụwa nile na 1st nke December ịkpọlite ​​ndị oha banyere AIDS (Enwetara Immuno Erughi ọrịa). AIDS bụ a ọrịa ọrịa mere n'ihi oria nke Human immunodeficiency Virus (HIV). The ụbọchị na-eme ememe site ọchịchị òtù, Ndi otu Ngo, obodo ọha na ahụ ike ndị ọzọ isi site n'ịhazi okwu ma ọ bụ forums ụka metụtara AIDS.
The President of United States kwuru, otu ukara mara ọkwa maka World AIDS Day n'afọ 1995 nke e malitere iso site ná mba ndị ọzọ niile gafee ụwa. Dị ka ike ike ọnu, gburugburu 25 nde mmadụ nwụrụ site 1981 ka 2007 n'ihi na nke HIV na ọrịa. Ọbụna mgbe ohere nke alụso nje virus ọgụ ọgwụgwọ na ọtụtụ ebe, gburugburu 2 nde mmadụ (opekempe 270,000 nke ngụkọta bụ ụmụaka) na 2007 na nje a ọrịa ọrịa.
World AIDS Day ememe aghọwo kasị ghọtara ike ụbọchị ememe mba. World AIDS Day ememe awade isi ohere ndị òtù ahụ ike dịkwuo mmata n'etiti ndị mmadụ, kasị ekwe omume ohere ọgwụgwọ nakwa dị ka-ekwu banyere mgbochi.
ỤWA AIDS ỤBỌCHỊ 2017
World Ọrịa Aids Day 2017 a ga-eme ememe na Friday, on 1st nke December.
ỤWA AIDS ỤBỌCHỊ AKỤKỌ
World AIDS Day mbụ visualized site Thomas Netter na James W. Bunn n'ọnwa August na 1987. Thomas Netter na James W. Bunn ma ndị ọha na eze ozi ọrụ maka AIDS Global Program na WHO (World Health Organization) na Geneva, Switzerland. Ha na-akọrọ ha echiche banyere AIDS ụbọchị ka Dr. Jonathan Mann (Director nke AIDS Global Program), onye mma na echiche na-atụ aro na World AIDS Day ememe 1st nke December n'afọ 1988.
World AIDS Day ememe e kpebiri site na ha ka a na-eme ememe ọ bụla afọ na 1st nke December n'ụzọ ziri ezi. Ha chere na ọ ga-kpebiri anya site na ntuli aka oge, Christmas ememe ma ọ bụ ndị ọzọ na ememe. Ọ ga-eme ememe n'oge oge mgbe ndị mmadụ na ozi ọma media nwere ike ịkwụ ụgwọ ọzọ mmasị na ntị na-akpọsa ozi ọma niile gafee ụwa.
The Joint United Nations Maka HIV / AIDS, makwaara dị ka UNAIDS, bịara n'ime utịp ke afọ 1996 na malitere akwalite n'ụwa nile. Kama ịbụ na-eme ememe maka naanị otu ụbọchị, World AIDS Campaign na oru site UNAIDS na afọ 1997 na-elekwasị anya na AIDS mmemme, mma nkwukọrịta, ọrịa mgbochi ọrịa mmata amụta maka dum afọ.
Na-amalite afọ, Ụwa AIDS Day themes lekwasịrị anya nanị na ụmụaka ka na-eto eto, bụ ndị e mechara ghọtara dị ka a ezinụlọ ọrịa dị ka onye ọ bụla nke ọ bụla afọ otu nwere ike nje HIV. ebe ọ bụ na 2007, Ụwa Ọrịa Aids Day malitere anọchi site na otu iconic ngosi nke AIDS Ribbon site White House.
ỤWA AIDS ỤBỌCHỊ IBUOTIK
UNAIDS malitere n'ịhazi World AIDS Day mkpọsa-eme ememe na akpan akpan kwa afọ themes maka mma zuru ụwa ọnụ mmata banyere ọrịa. Na-esonụ bụ ndị ndepụta niile afọ maara ihe gburugburu nke World Ọrịa Aids Day:
The isiokwu nke afọ 1988 maka World Ọrịa Aids Day mkpọsa bụ, "Communication".
The isiokwu nke afọ 1989 maka World Ọrịa Aids Day mkpọsa bụ, "Youth".
The isiokwu nke afọ 1990 maka World Ọrịa Aids Day mkpọsa bụ, "Women na AIDS".
The isiokwu nke afọ 1991 maka World Ọrịa Aids Day mkpọsa bụ, "Ịkekọrịta Ịma Aka".
The isiokwu nke afọ 1992 maka World Ọrịa Aids Day mkpọsa bụ, "Community Inyefe".
The isiokwu nke afọ 1993 maka World Ọrịa Aids Day mkpọsa bụ, "Mee".
The isiokwu nke afọ 1994 maka World Ọrịa Aids Day mkpọsa bụ, "AIDS na Family".
The isiokwu nke afọ 1995 maka World Ọrịa Aids Day mkpọsa bụ, "Nnwekọrịta Rights, Nnwekọrịta Ibu Ọrụ ".
The isiokwu nke afọ 1996 maka World Ọrịa Aids Day mkpọsa bụ, "One World na One Hope".
The isiokwu nke afọ 1997 maka World Ọrịa Aids Day mkpọsa bụ, "Children ebi a World na AIDS".
The isiokwu nke afọ 1998 maka World Ọrịa Aids Day mkpọsa bụ, "Force for Change: World AIDS Mgbasa Ozi na Young People ".
The isiokwu nke afọ 1999 maka World Ọrịa Aids Day mkpọsa bụ, "Geenụ, Mụta, Live: World AIDS Mgbasa Ozi na Children na Young People ".
The isiokwu nke afọ 2000 maka World Ọrịa Aids Day mkpọsa bụ, "AIDS: Men Mee a Iche ".
The isiokwu nke afọ 2001 maka World Ọrịa Aids Day mkpọsa bụ, "Ọ metụtara m. Ị nwere"?
The isiokwu nke afọ 2002 maka World Ọrịa Aids Day mkpọsa bụ, "Ihere na Ịkpa Ókè".
The isiokwu nke afọ 2003 maka World Ọrịa Aids Day mkpọsa bụ, "Ihere na Ịkpa Ókè".
The isiokwu nke afọ 2004 maka World Ọrịa Aids Day mkpọsa bụ, "Women, Girls, HIV na AIDS ".
The isiokwu nke afọ 2005 maka World Ọrịa Aids Day mkpọsa bụ, "Kwụsị AIDS: Na-na Nkwa ".
The isiokwu nke afọ 2006 maka World Ọrịa Aids Day mkpọsa bụ, "Kwụsị AIDS: Na-na Nkwa-aza ".
The isiokwu nke afọ 2007 maka World Ọrịa Aids Day mkpọsa bụ, "Kwụsị AIDS: Na-na Nkwa- Leadership ".
The isiokwu nke afọ 2008 maka World Ọrịa Aids Day mkpọsa bụ, "Kwụsị AIDS: Na-na Nkwa-ebute-ike-Naputam ".
The isiokwu nke afọ 2009 maka World Ọrịa Aids Day mkpọsa bụ, "Universal Access na Human Rights".
The isiokwu nke afọ 2010 maka World Ọrịa Aids Day mkpọsa bụ, "Universal Access na Human Rights".
Isiokwu site na afọ 2011 ka 2015 maka World Ọrịa Aids Day mkpọsa bụ, "Inweta ka efu: efu ọhụrụ HIV na-efe efe. efu ikpa oke. Efu AIDS metụtara ọnwụ "
ỤWA AIDS ỤBỌCHỊ EME
Dịgasị iche iche nke omume nwere ike mere n'ụbọchị World Ọrịa Aids ụbọchị ememe dịkwuo mmata ma kesaa ozi nke isiokwu nke akpan akpan afọ. Ọ bụ nnọọ dị mkpa ka iwelie mmata n'etiti ndị mmadụ ka ha na-isi na lekwasịrị nke usoro ihe omume. Ụfọdụ ndị na-eme na-e dere n'okpuru ebe:
Community dabeere mmadụ na òtù ga-kpọtụụrụ ka atụmatụ ndị World AIDS Day eme, iji hazie a zubere nzukọ. Ọ nwere ike na-ọma malitere si obodo clinics, ụlọ ọgwụ, na-elekọta mmadụ ọrụ ụlọ ọrụ, ụlọ akwụkwọ, AIDS onwe iche iche na etc.
A otu ihe omume ma ọ bụ usoro nke onwe ha ihe nwere ike isi kpebisie ike n'ihi na mma mmata site ndị ọkà okwu na exhibitors site forums, rallies, ike fairs, obodo ihe, okwukwe ọrụ, parades, ngọngọ ọzọ na etc.
A ọha na nkwupụta nwere ike osụk aka gị n'ụlọnga osisi ịmata ihe na-ude maka World AIDS Day.
Red mpe mpe akwa a ga-eyi ma ọ bụ na-ekesa ndị ọzọ akara olileanya na ụlọ akwụkwọ, ọrụ saịtị ma ọ bụ obodo dị iche iche. Kọmputa mpe mpe akwa nwekwara ike ga-ekesa na-elekọta mmadụ media outlets.
All na-eme (ka DVD ngosi ndị na-arịa ọrịa AIDS mgbochi nzukọ ọmụmụ) nke ulo oru, ụlọ akwụkwọ, ike na-elekọta òtù, ndị ụkọchukwu na obodo ụlọ ọrụ ga-ume maka ha oké ọrụ.
A ọkụ kandụl vigil nwere ike ẹkenịmde ke ọha ogige ma ọ bụ kacha nso gị n'ụlọnga ebe-ọbù-abù, egwú, dancers, na-ede uri, akụkọ tellers na etc ike kesaa ozi nke Ọrịa Aids mgbochi site n'ịnọgide arụmọrụ.
World AIDS Day ozi nwere ike na-ekesa site na-ejikọ ya na saịtị weebụ gị n'ụlọnga.
All atụmatụ ihe na-eme ga-ama na-ekesa site na e-mail, akwụkwọ akụkọ, mailings ma ọ bụ electronic Bulletins.
Ndị mmadụ pụrụ ịbụ maara site n'igosipụta ngosi, akwụkwọ ịma ọkwa, videos, akwụkwọ ọkwa, broshuọ maka HIV / AIDS na etc.
World AIDS Day eme nwere ike asian a nnukwu ìgwè mmadụ n'otu ntabi site blọọgụ, Facebook, Twitter ma ọ bụ site na ndị ọzọ na-elekọta mmadụ media weebụsaịtị.
Ifịk ifịk eme ka ndị ọzọ dị iche iche nke ememe World AIDS Day.
A ọkụ kandụl ememe nwere ike ẹkenịmde ke ebe nchekwa nke nwụrụ onye ruru HIV / AIDS.
Ndị ndú okpukpe na-ume na-ekwu okwu ihe maka AIDS ekweghị ibe nọrọ na ihe ihere.
A ọrụ nwere ike malitere inye nri, ndo, njem, enyi n'ihi na ndị mmadụ na HIV / AIDS. Ha nwekwara ike a kpọrọ òkù na-elekọta ọrụ, ofufe ma ọ bụ ndị ọzọ ọrụ na-amụba ha ụkpụrụ omume.
GỤỌ ỌZỌ: Olee otú dee a na-emeri College tinye edemede?
Ebumnobi nke ỤWA AIDS ỤBỌCHỊ 2017
Nzube nke World Ọrịa Aids Day ememe kwa afọ ọma akwado Member States iji wulite ọhụrụ ma dị irè atumatu na mmemme, ewusi ike na usoro dị ka nke ọma dị ka dịkwuo ike nke ike ndi kwupụta HIV / AIDS. Ụfọdụ n'ime ndị isi ebumnobi nke World Ọrịa Aids Day e depụtara n'okpuru ebe:
Na-eduzi so n'òtù maka ụwa na-amụba igbochi na ịchịkwa jikoro maka HIV / AIDS.
Na-enye so n'òtù a oru nkwado maka mejuputa atumatu atụmatụ maka mgbochi, elekọta nakwa dị ka ọgwụgwọ maka HIV / AIDS gụnyere ule, ndụmọdụ nke nne ebute ọrịa nwa, STI akara na alụso nje virus ọgụ ọgwụ.
Iji maara ndị mmadụ banyere alụso nje virus ọgụ ọgwụ ma ọ bụ ndị ọzọ onu ahia nke nwere ike inyere ha ibuso HIV / AIDS.
Iji na-agụnye ndị ọgbọ dị iche iche na mgbasa ozi maka na-kasị dị irè n'ihi.
Iji gbaa ihe ụmụ akwụkwọ si n'ụlọ akwụkwọ, mahadum na-elekọta mmadụ na owuwu na-eme na asọmpi haziri maka AIDS.
Ka ibelata na na-ejikwa ọnụ ọgụgụ ndị ọrịa oria HIV / AIDS nakwa dị ka na-agba ume na ndị ọgbọ iche iche maka condom.
ỤWA AIDS ỤBỌCHỊ slogans, Ruturu na Ozi (World AIDS ỤBỌCHỊ 2017)
"HIV / AIDS enweghị ókè".
"My play Safe Sex e ẹmende iche n'ihi na ndị na-akatọ chere na ọ bụ na-abụghị eziokwu. Ọ bụ a play nke na ọ dịghị onye nwere AIDS, ma na-agụ akụkọ na-ekwu banyere otú o si na-aga na-agbanwe ndụ ha ".
"Obere enyere ndị mmadụ n'otu n'otu, nnukwu aka pụta ".
"AIDS bụ nnọọ mwute ọrịa. The esemokwu banyere AIDS 'ịbụ ụdị ụfọdụ nke ntaramahụhụ sitere n'aka Chineke bụ unyi ".
"Nye a nwa ịhụnanya, Ọchị na udo, bụghị AIDS ".
"Amaara m otu onye na onye na-adịghị ndụ bụ ndị nyere AIDS nwunye ya na naanị ihe ha mere bụ nsusu ọnụ".
"Ọ bụrụ na ị na-ekpe ikpe ndị mmadụ ị na-enweghị oge na-hụrụ ha n'anya".
"Ka anyị na-enye bu na H.I.V./AIDS na bụghị zoo ya, n'ihi na nanị ụzọ ka o yie ka a nkịtị ọrịa dị ka TB, ka cancer, bụ mgbe na-abịa ma na-ekwu a nwụrụ n'ihi nke H.I.V./AIDS, na ndị mmadụ ga-akwụsị banyere ya dị ka ihe pụrụ iche ".
"The AIDS bụ ọrịa nke na-esi ike ikwu okwu banyere".
"M na-ọkụ si na AIDS na mere na ọ dịghị AIDS ọrụ a di na nwunye nke afọ. M mere iwe na ndị mmadụ ka nọ na-na-na ọrịa a na ọ dịghị onye nwere ike inye gị - ị ga-aga ma na-esi na ya "!
"Nwa m nwụrụ nke AIDS".
"N'ihi na enweghị akụziri na AIDS, ikpa oke, egwu, egwu, na ụgha gbaa m gburugburu ".
"Ị nwere ike ghara inwe AIDS si a amakụ ma ọ bụ a okwukwe aka ma ọ bụ a nri na a enyi".
"Nke a AIDS stof bụ mma egwu. M na-atụ m na-adịghị enweta ya ".
AIDS (enwetara dịghịzi erughi syndrome ma ọ bụ enwetara immunodeficiency syndrome) mere site HIV (mmadụ immunodeficiency virus) nke ọgụ dịghịzi usoro nke ahụ mmadụ. The ọrịa e mbụ ghọtara na afọ 1981. Ya na nke mbụ kwuru na ọ bụ site na aha AIDS na 27nke nke July n'afọ 1982.
HIV ọrịa nwere ike na-adị mfe site n'otu onye nke ọzọ ma ọ bụrụ na ha kpọtụụrụ mgbe kpọmkwem site na mucous akpụkpọ, aru ọmụmụ ma ọ bụ ọbara. Na mbụ oge, enwere ọtụtụ na-elekọta mmadụ ihere maka ndị mmadụ na HIV / AIDS. Dị ka atụmatụ, ọ e kwuru na gburugburu 33 nde mmadụ, a na-oria na ihe HIV na 2 nde mmadụ nwụrụ n'ihi ya kwa afọ na.
HIV bụ a virus nke na-awakpo ndị T-mkpụrụ ndụ nke dịghịzi usoro na akpata ọrịa a maara dị ka AIDS. Ọ dị n'ime ahụ mmadụ oke mmiri dị ka ọbara, semen, mmamiri oke mmiri, mmiri ara nke oria onye nke nwere ike gafere ndị ọzọ site na a kpọmkwem kọntaktị dị ka ọbara, ọnụ nwee mmekọahụ, gbasara ike mmekọahụ, mmamiri mmekọahụ ma ọ bụ ịgbanye mmeru ndudu. Ọ nwere ike gafere na nwa site ụmụ nwaanyị dị ime n'oge nnyefe ma ọ bụ site na ya ara.
Ọ na-e sitere na 19nke na 20nke na narị afọ nke dị n'ógbè n'ebe ọdịda anyanwụ-Central Africa. N'ezie ọ dịghị ihe ọ bụla na-agwọ ya ma N'ezie nke ọrịa nwere ike ịbụ lessens ala site ụfọdụ ọgwụgwọ.
Ịrịba ama na Mgbaàmà nke HIV / AIDS
A onye na HIV / AIDS nwere ndị na-esonụ mgbaàmà:
Sweats n'oge abalị
Buru Ibu glands
ma, na ọtụtụ mgbe nke a na ọrịa mbụ mgbaàmà na-okụrede ruo ọtụtụ afọ n'oge nke HIV virus na-akpata emebi dịghịzi usoro nke enweghị ngwọta. The nje onye ọbụla na-ele ọ bụla mgbaàmà n'oge a na-egosi ike.
ma, na mbubreyo ogbo nke HIV na ọrịa (mgbe virus na-ebelata dịghịzi usoro ibuso ya agha) onye na-amalite ọrịa na AIDS. Onye na oge ogbo ọrịa malitere-egosi na-esonụ mgbaàmà:
na-adịgide adịgide ike ọgwụgwụ
ahụ ọkụ (n'elu 100f)
afọ ọsịsa (persistent na-adịghị ala ala)
White tụrụ na ire na ọnụ
Esophagitis (mbufụt nke ala nkọlọ linings)
Kaposi sarcoma, cancer nke cervix, akpa ume, ikensi, imeju, isi, olu na cancer of dịghịzi usoro (lymphomas).
meningitis, ụbụrụ na elu neuropathy
Toxoplasmosis (ọrịa nke ụbụrụ)
E nwere ụfọdụ myths nke na-agbasa ke otu banyere Enyem. Ọrịa Aids mgbe agbasa site n'aka shake, amakụ, zeeuere, unbroken akpụkpọ aka ma ọ bụ ojiji nke otu ụlọ mposi.
« Letter na nchịkọta akụkọ banyere mmiri na-egbu osisi nsogbu n'oge udu mmiri
Popular Colleges N'okpuru Du (University of Delhi) »